Tue, Jul 14, 2020 at 6:45am
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता कर्णबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु राष्ट्र, पार्टी, नेपाली जनताका निम्ति सान्दर्भिक नहुने बताए। उनले भने, 'अहिले हामीले अवलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, यो कुनैपनि चिजसँग अहिलेको राजीनामा सान्दर्भिक छैन।' नेपालमा ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गरि बनेका सरकारलाई आफ्नै दलबाट असहयोग हुने गरेको उनले बताएका छन्।..
काठमाडौं। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। बुधबारको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि थप रणनीति तय गर्न दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले भेला गरेका हुन्। ललितपुरको एक होटलमा करिब एक घण्टादेखि प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरु भेला भएका छन्। भेला अहिले पनि जारी छ। छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल..
काठमाडौं। नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसंघले) तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गरेको छ। बुधवार विज्ञप्ति जारी गरेर नेविसंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल नघटाए सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। उसले कोरोना महामारीका बेला जनतालाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन बाध्य नपार्न सरकारलाई चेतावनी दिएको हो। महामारीका बेला न्युन मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उल्टै बढाएको..
रुकुमपूर्व। रुकुम(पूर्व)मा श्रीमतीले आफ्ना श्रीमानको हत्या गरेकी छन्। श्रीमतीले चिर्पटले हान्दा श्रीमानको ज्यान गएको हो। सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर २ प्वाङको सुद्रीमा २३ वर्षीय विछोड विकलाई २० वर्षीया पत्नी रेश्माले दाउराले हान्दा ज्यान गएको हो। पारिवारिक विवादका कारण गए राति ११ बजेतिर श्रीमतीले श्रीमानलाई दाउराले टाउकामा हान्दा ज्यान गएको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष जीवन केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज बिहान..
काठमाडाैं, १७ असार । नेकपा स्थायी कमिटीको पाँचौ दिनको बैठक शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरू बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी छन् । विगतको बैठकमा कुनैदिन उपस्थित र कुनैदिन अनुपस्थित भएका ओली बुधवारको बैठकमा भने शुरूमै उपस्थित भएका हुन् । मंगलवारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ..
काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएकाले बुधबारको संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित हुने भएको छ । संसद बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले भने, ‘आजको बैठकमा शोक प्रस्ताव मात्रै प्रस्तुत हुन्छ ।’ यसअघि संसद सचिवालयले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सेवा विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत..
काठमाडौं, १७ असार । नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएको छ । उनको बुधबार बिहान गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौंमा निधन भएको नेपाली कांग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर २ का सभापति द्रोण कुँवरले जानकारी दिए । ६६ वर्षीया छन्त्याल मुट सम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन् । बाग्लुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ खुंखानीमा जन्मिएकी र बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका– १ बुर्तिबाङमा बसोबास बसोबास गर्दै आएकी छन्त्याल..
धनगढी, १७ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म १ सय ७५ जना ९ वर्षमुनिका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा बालबालिकामा पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिएको हो । १ साताअघि प्रदेशभरिमा ६१ बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिए पनि सो सङ्ख्या बढ्दै गएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए । ‘सङ्क्रमण देखिएका सबै बालबालिका बुवाआमासित भारतबाट फर्किएकाहरू हुन्,’..
काठमाडौं, १७ असार । गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लामा बुधबार थप २८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्‍टि भएको छ। प्रदेश क्षयरोग केन्द्र, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र भरतपुर अस्पताल, चितवनमा गरिएको परीक्षणमा थप २८ जनाको कोभिड-१९ नतिजा पोजिटिभ देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माका अनुसार नयाँ संक्रमितहरूमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का १२ जना, गोरखा र..
काठमाडौं, १७ असार । आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र परामर्शका लागि मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरुलाई आज (बुधबार) ८ बजे बालुवाटार बोलाएको जानकारी गराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि भनेर हामीलाई बालुवाटार बोलाउनु भएको छ,’..
एजेन्सी। पेनाल्टीमार्फत लियोनेल मेस्सीले करियरको ७ सयौँ गोल पुरा गर्दा बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगामा एथ्लेटिको म्याड्रिडसँग बराबरीमा रोकिएको छ । मंगलबार भएको खेल २–२ को बराबरीमा टुंगिएको हो । क्लबका लागि मेस्सीको ७२४ खेलमा यो ६३० औँ गोल हो । १४ महिनाअघि मात्र करियरको ६ सयौँ गोल पुरा गरेका मेस्सी ७ सयौँ गोलको कोशेढुंगा पार गर्ने सातौँ खेलाडी हुन् । उनीभन्दा..
एजेन्सी। इरानको राजधानी तेहरानस्थित एक क्लिनिकमा भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा १३ जनाको ज्यान गएको छ। सीना अतहर क्लिनिकमा सो विस्फोट भएको र ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्नसक्ने इरानी अधिकारीहरुले बताएका छन्। दर्जनौं मानिसहरु घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउने अधिकांश महिला रहेको बताइएको छ। ग्यास लिक हुँदा सो विस्फोट भएको र विस्फोट भएको स्थानमाथिको आकाशसम्म धुवाँ देखिएको बीबीसीले जनाएको छ ..
काठमाडाैं, १७ असार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न दिने गरी प्रस्ताव भएको क्षेत्राधिकार हटाएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक पारित हुने भएको छ । आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकका प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर विधेयक पारित गर्न लागिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति आलोचना भएपछि उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन सत्तारूढ दल तयार भएको..
काठमाडाैँ १७ असार। नेकपाभित्र नाटकीय रूपमा विकसित सत्ता–संघर्षलाई लिएर कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले मध्यरातमा ट्वीट गरेका छन् । मंगलबार राति १ बजेर ३ मिनेटमा नेता भुसालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो जहाज महाभुमरीमा हेलिने अनिष्ट सम्भावना नजिकिन थाल्यो १ अर्थात्, हामी हरेकले फेरि एकपटक विवेक र धैर्यको परीक्षा दिनुपर्ने भयो १ नहडबडाएर, एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिनेछ  ।’ यसैगरी पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि पार्टीभित्रको संघर्षलाई लिएर मंगलबार राति..
काठमाडौँ, १७ असार । गत शनिबारदेखि नेपाल प्रवेश गर्न थालेको सलहको झुन्ड मंगलबारसम्म २७ जिल्लामा पुगेको पाइएको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका किट विज्ञ एवं सलह सूचना केन्द्रका संयोजक रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार मंगलबार साँझसम्म सलहका झुन्डहरू २७ जिल्लामा देखिएका हुन् । केन्द्रका अनुसार सलहका ५ वटा झुन्ड भारतबाट नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । झुन्डहरू २७ जिल्लामा देखिएपनि अन्य स-सना..
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीका अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार हटाउन विभिन्न कोसिस भएको भन्ने सम्बन्धमा दिएका पछिल्लो अभिव्यक्तिका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा यही असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हटाउन छिमेकी भारतका संयन्त्र र पार्टीका नेता भित्रभित्र संलग्न..
काठमाडौं। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौं उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ। कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिए। सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र..
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगमा ‘नेकपा एमाले’ नामको दल दर्ताको लागि निवेदन परेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा एमाले नामको दल दर्ताको निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरे। झापाकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले पार्टी दर्ताका लागि आइतबार निवेदन परेको हो। उक्त विषयबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत छलफल भएको थियो। पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मिलेर दुई वर्षअघि नेकपा..
Results 9851: You are at page6of 329